IMEX America Hita meloka! Niverina indray ny Fivoriana sy Fivoriambe Vaovao!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » IMEX America Hita meloka! Niverina indray ny Fivoriana sy Fivoriambe Vaovao!
Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Ray Bloom, mpanorina ny IMEX manetry tena sy mirehareha, dia tao amin'ny efitrano fampahalalam-baovao tao IMEX America any Las Vegas ao amin'ny Mandalay Bay Hotel Convention Center androany.
Izy no nanao izany! IMEX no nanao izany!
Ny IMEX America dia nangataka ireo matihanina hivory, ary namaly ny World of Tourism tamin'ny fampisehoana tao Las Vegas tamin'ny IMEX AMERICA 2021.
Nisy gorodona be olona, ​​mpividy, mpanao fampirantiana ary matihanina amin'ny fizahantany nanidina nankany Sin City androany mba hampiseho amin'izao tontolo izao: Niverina tamin'ny heriny tanteraka ny indostrian'ny fihaonana sy ny fandrisihana.
eTurboNews ary ny Tambajotra fizahan-tany manerantany dia isan'ireo mpanentana.
Nizara ny traikefany ireo mpikambana ao amin'ny WTN nitsidika ny fijoroan'ny WTN.
Suresh Nakarmi avy ao amin'ny Shakti Travels and Tours any Nepal dia nilaza hoe: “Hihaona amin'ny namana taloha izahay ary hanoratra raharaham-barotra lehibe. Misy fotoana mamiratra eo amin'ny faravodilanitra ho an'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerantany. ”
“Manana famandrihana maro ho an'i Bali azo antoka izahay amin'ny taona ho avy, hoy i Rico Tandage.
Izany dia nanakoako tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety telo nataon'ny Destination International, ny Tale Jeneralin'ny Discover Puerto Rico nanambara ny rakitsoratra iray taorian'ny firaketana, ary Visit California androany.
Jereo ny seho tamin'ny Andro 1: